Scribble Live: Gwaro, Ronga uye Ita Yako Yemukati Zvirongwa Martech Zone
China, Kurume 17, 2016 Mugovera, March 19, 2016 Douglas Karr
ScribbleLive yakazivisa kuvhurwa kwe ScribbleLive Chirongwa, gwaro remukati nekuronga chigadzirwa chinosimudzira kugona kwevatengesi kubva kuchirongwa kusvika pakuitwa.Kuvhurwa kweSchulbleLive Chirongwa ndiko kuwedzeredza kwavo kwazvino chigadzirwa suite uye Saas software seyakazara yakazara chigadzirwa application.
Maererano CMI / KushambadziraProfs kuongorora, vashambadziri vane gwaro rezvinyorwa zvakanyorwa vane 60% vangangobudirira, asi 32% chete vane imwe. Chirongwa chinogonesa vashambadzi kuvaka uye kunyora yavo yemukati yekushambadzira zano uye rega itungamire yavo yekushambadzira kuronga uye kuita.
ScribbleLive Chirongwa inoenderana nezvirimo zvekushambadzira zvinangwa nekufamba vashandisi kuburikidza nhevedzano yemibvunzo / sarudzo kuti upindure panguva yechikamu chechirongwa icho chinobatsira kuona zvinangwa / manas. Izvo zvino zvinobva zvasungirwa kune zvemukati zvidimbu kuti zviurayiwe uye zvibatanidzwe mune yako timeline / yekugadzirisa khalendari kuti uite akanakisa ezvinyorwa zvisarudzo; sekuti, ndiani wako wauri kutaura naye, zvauri kutaura uye chiteshi chauri kuzvitaura pairi.
Ndi ScribbleLive Chirongwa
Content Content - gadzira uye nyora yako yekushambadzira sosi yekuona kuti yakadzika mune zvese zvemukati zvaunogadzira.
Zvinangwa nezvinangwa - Vaka munhu wevatengi, zvinyorwa zvemukati, nzvimbo dzekutarisa uye kuyera mashandiro ezvako zvemukati zvinopesana nezvinangwa zvako zvine hungwaru.
Shingairira - paza masilos echikwata uye shanda panguva imwe chete kuti uite zano rako, nebasa renhengo yega yega rakatsanangurwa kubva pakuronga kushambadza.
Gadzira uye Ita - kuisa pakati uye kururamisa mafashama emvura, ichideredza huwandu hwezvishandiso kutsigira ako ekushambadzira.
Editorial Calendar - inoshanduka uye inoshamwaridzika inoshamisira yekunyora khalendari kubatsira kuronga nekugadzirisa zvemukati.
Publish - kuWordPress pamwe nemamwe maCMS masystem pamwe neFacebook, Twitter, LinkedIn uye Google Plus.
Nezve Scribble Live
zvese mune imwe SaaS mhinduro inosanganisa sainzi yedata nehurongwa hwemukati uye kuronga, kugadzira, uye tekinoroji yekuparadzira kuendesa yakagadziriswa mhedzisiro yebhizinesi. ScribbleLive inoshandiswa nemabhiza 1000+ anosanganisira Bank of America, Bayer, Deutsche Telekom, Ferrari, Oracle, Red Bull uye Yahoo!
Tags: zvemukati yekunyora karendazvemukati zvinangwakuronga zvemukatizvemukati zanozvemukati nguvakalori wezvinyorwavanhukunyorachirongwa chekunyora